Crane Construction, Crane Machine, Crane Service, Injini Crane - XJCM
I-Crane Terrain ekrwada
UkuziLungisa kweNqaba Crane
Amacandelo eSakhiwo amakhulu
Ulwakhiwo lwe Crane
Amalungu esakhiwo esidala
Amacandelo olwakhiwo lweLoader
I-crane yokunyusa intambo
XJCM lishishini eliphezulu-zobugcisa yesizwe nto leyo ngobungcali uyilo, ukuvelisa kunye nokujongana crane yendlela, ilori nendwe, inqaba nendwe kunye nabanye oomatshini zokwakha.
Ukuzimisela kwendlu ngokwazo
I-crane yendlela erhabaxa
Ukongeza kwiimveliso zokusebenza eziphezulu, iXJCM ibonelela ngenkonzo ethembekileyo yelizwe. Oko kuthetha ukuba siyakuvumela ukuba usebenze ngokukhuselekileyo nangokufanelekileyo-nokuba kukwiimeko ezimbi.
XJCM brand 12 ton ezincinane knuckle boom iinkuphelostencils truck
I-crane ye-XJCM eyi-80 iyathengiswa
Maleko itoni 24 umbhobho
XJCM brand Ukuphakamisa intambo crane
XJCM brand 25 ton iinkuphelostencils kunye nendwe iyathengiswa
Umatshini wokuphakamisa iitoni ezingama-30 we-crane
I-XJCM brand Ukuzilayisha ngokwakho kunye nokuThoba iSanitatio ...
Yasekwa ngo-2002, Xuzhou Jiufa Construction Machinery Co., Ltd (XJCM). Lishishini lezabelo elinemali eyimali eyi-RMB16 yezigidi. Inkampani yethu igubungela indawo engamawaka angama-53 eemitha zesikwere, ezingama-38 ezingamawaka ezenzelwe oomasifundisane. Sixhotyiswe ngaphezu kwama-260 amaziko amatsha naphambili. Sigxile ekuveliseni izakhiwo ezikhulu zoomatshini bokwakha kunye nokukwazi kwethu ukuvelisa ngonyaka ngamawaka angama-20 eetoni. Oomatshini abakumgangatho ophezulu wokulawulwa kwamanani, ukuwelda, ukubumba kunye nokunyanga ubushushu kusetyenziswa kwinkqubo yemveliso yethu. Iimveliso eziphambili ze-XJCM zingumhlaba we-crane, ilori yendalo, i-crane yokuziqhelanisa, ipayipi yemisebenzi emininzi kunye neendawo ezininzi zoomatshini bokwakha. Ngokuqinisekileyo zikumgangatho osemgangathweni. Iicranes zethu zothotho lwe-RT, i-QY yeelori zothotho kunye ne-JFYT yeenqanawa zothotho lwenqanawa zithunyelwa eMntla Melika. UMzantsi Melika, iAfrika, uMbindi Mpuma, iNtshona yeAsia, uMzantsi-mpuma weAsia kunye namanye amazwe angaphezu kwama-30 kunye nemimandla.
I "RT series off-road crane" ngokuzimeleyo iphandwe kwaye yaphuhliswa yinkampani yathathelwa ingqalelo njenge "mveliso yobugcisa obuphezulu" liSebe lezeNzululwazi kunye neThekhinoloji yePhondo laseJiangsu kwaye yadweliswa kwi "Isicwangciso seTotshi seSizwe seProjekthi yokuBonisa iMveliso" nguMphathiswa yezeNzululwazi nobuChwepheshe.
I-XJCM igxile ekuveliseni izakhiwo ezinkulu zoomatshini bokwakha. Sibonelela amabhakethe e-excavator, iibhakethi zokulayisha, iingalo zerocket, i-booms, izakhelo zangaphambili, izakhelo zangemva, iipini kunye nezinye iimveliso ezinxulumene neXCMG, CAT, FOTON, LIUGONG, HELI forklift, YUTONG kunye nezinye ezinye iinkampani zoomatshini ezaziwayo eTshayina.
I-XJCM brand boom cranes
Isakhelo se Crane
Isakhelo esingasemva seLoader
XJCM unikezelo Crane boom
I-XJCM yenza ngokwezifiso yonke iBucket yeSilayidi seModeli
IsiTshayina Somenzi Intengiso 2ton To 100ton Excava ...
Idilesi:NO.1 IDapeng Industrial Park, Isithili saseTongshan, eXuzhou, eJiangsu, China